Na-arụ ọrụ na faịlụ .htaccess Na WordPress | Martech Zone
WordPress bụ nnukwu ikpo okwu nke emere ka ọ dị mma site na etu esi arụ ọrụ WordPress dashboard. Can nwere ike nweta ọtụtụ, na usoro nke ịhazi ụzọ saịtị gị si eche na ọrụ ya, site na iji ngwa ọrụ WordPress mere ka ị dị ka ọkọlọtọ.
Oge na-abịa na ndụ onye nwe weebụsaịtị ọ bụla, agbanyeghị, mgbe ị ga-agafe ọrụ a. Na-arụ ọrụ na WordPress .htaccess faịlụ nwere ike ịbụ otu ụzọ isi mee nke a. Faịlụ a bụ faịlụ bụ isi nke saịtị gị na-adabere na ya, ọ na-echekarị etu esi arụ ọrụ weebụsaịtị gị.
Enwere ike iji faịlụ .htaccess nweta ọtụtụ ihe bara uru, n'agbanyeghị. Anyị ekwuola ụfọdụ n’ime ha na mbụ, gụnyere usoro ịme regex redirects na WordPress, na nyocha ọzọ n'ozuzu na nkụnye eji isi mee redirects maka WordPress. N'ime ntuziaka abụọ a, anyị abanye ma dezie faịlụ .htaccess, mana na-akọwaghị ọtụtụ ihe kpatara faịlụ ahụ dị na mbụ, yana otu ị ga - esi jiri ya.
Nke ahụ bụ nzube nke isiokwu a. Nke mbu, anyi gha lee anya ihe faịlụ .htaccess mere na nhazi WordPress. Mgbe ahụ, anyị ga-akọwa otu ị ga-esi nweta ya, yana otu ị ga - esi dezie ya. N'ikpeazụ, anyị ga-egosi gị ihe kpatara ịchọrọ ime nke ahụ.
Gịnị bụ faịlụ .htaccess?
Ka anyi buru ihe ndi ozo n’uzo mbu. Faịlụ .htaccess abụghị teknụzụ a WordPress faịlụ. Ma ọ bụ, iji tinye ya n'ụzọ ziri ezi karị, faịlụ .htaccess bụ n'ezie faịlụ nke Apache sava weebụ na-eji. Nke a bụ usoro eji ya ugbu a site na imerime WordPress saịtị na ụsụụ ndị agha. N'ihi Apache zuru ebe niile ma a bịa na ijikwa saịtị WordPress, saịtị ọ bụla dị otú ahụ nwere faịlụ .htaccess.
Faịlụ .htaccess tinyere ụfọdụ njirimara na faịlụ ndị ọzọ nke saịtị WordPress gị maka nhazi. Aha njirimara ahụ bụ faịlụ zoro ezo ma ọ ga-adị mkpa ka ezughị iji dezie ya. Ọ na-anọdụ na ndekọ ndekọ nke saịtị WordPress gị.
Cheta, faịlụ .htaccess na-eme otu ihe na naanị otu ihe: ọ na-ekpebi etu esi egosi ebe nrụọrụ gị. Ọ bụ ya.
Zoro n'azụ nkọwa a dị mfe bụ ọtụtụ mgbagwoju anya, agbanyeghị. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị nwe saịtị, plugins, na isiokwu na-eme mgbanwe n'ụzọ a na-eji permalinks n'ime saịtị WordPress gị. Oge ọ bụla ị (ma ọ bụ ngwa mgbakwunye) gbanwere ụzọ gị permalinks na-arụ ọrụ, a na-echekwa mgbanwe ndị a na faịlụ .htaccess.
Chọta na-edezi faịlụ .htaccess
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ .htaccess ka emebere iji mezuo ihe ndị ahụ na saịtị gị, ị nwere ike idezi faịlụ ahụ iji nweta ọtụtụ nsonaazụ bara uru: ndị a gụnyere ịmegharị ntụgharị, ma ọ bụ naanị imezi nchebe na saịtị gị site na ịmachi ohere ịbanye n'èzí peeji ụfọdụ.
N'akụkụ a, anyị ga-egosi gị otu esi eme nke ahụ. Ma nke mbụ…
WARDỌ AKA NA NT:: Na-edezi faịlụ .htaccess nwere ike imebi weebụsaịtị gị.
Ime mgbanwe ọ bụla na faịlụ ndị dị mkpa nke saịtị gị na-agba dị egwu. Ị kwesịrị mgbe ndabere gị na saịtị tupu ịme mgbanwe ọ bụla na ya, ma nwalee n'etinyeghị saịtị dị ndụ.
N'ezie, enwere ezigbo ihe kpatara ya .htaccess file adịghị maka ọtụtụ ndị ọrụ WordPress. WordPress nwere ọnụ ọgụgụ doro anya nke ahịa maka obere weebụsaịtị weebụ, nke a pụtara na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ha, ka anyị ga-asị, ọ bụghị nke kachasị nyocha. Nke a bụ ihe kpatara faịlụ .htaccess ji zoo ndabara - iji zere ndị ọrụ novice na-emehie ihe.
Ingnweta ma na-edezi faịlụ .htaccess
Na nke ahụ niile n'ụzọ, ka anyị lelee otu ị ga-esi nweta faịlụ .htaccess. Iji mee nke ahụ:
Mepụta njikọ na weebụsaịtị site na iji FTP ahịa. Enwere ọtụtụ n'efu, ndị ahịa FTP dị ukwuu n'ebe ahụ, gụnyere FileZilla. Gụọ site na akwụkwọ enyere iji mee njikọ FTP na saịtị gị.
Ozugbo ị guzobere njikọ FTP, a ga-egosi gị faịlụ niile mejupụtara saịtị gị. Lelee anya na folda ndị a, ị ga-ahụ otu a na-akpọ ndekọ ndekọ.
N'ime folda a, ị ga-ahụ faịlụ .htaccess gị. Ọ ga-adịkarị nso na ndepụta nke faịlụ na folda ahụ. Pịa na faịlụ ahụ, wee pịa nlele / dezie.
Faịlụ a ga-emeghe na ederede ederede.
Ma nke ahụ bụ ya. Ugbu a enyere gị ohere ịgbanwe ihe na faịlụ gị, mana rịba ama na ị gaghị achọ ime nke ahụ. Anyị ga-egosi gị otu esi eji faịlụ a na ngalaba na-esote, mana tupu anyị emee ọ bụ ezi echiche ịme mee otu mpaghara nke faịlụ .htaccess gị (iji ọkọlọtọ "chekwaa dị ka"), mee mgbanwe gị na mpaghara gị, wee bulite faịlụ ahụ na saịtị a kara aka (dịka anyị kwuru n'elu).
Iji Faịlụ .htaccess
Ugbu a ị dịla njikere ịmalite iji arụmọrụ ndị ọzọ enyere site na faịlụ .htacess. Ka na-amalite site na a ole na ole ndị dị mkpa.
301 na-atụgharị - Ntughari 301 bụ obere koodu nke ahụ na-eziga ndị ọbịa site na ibe peeji nke ọzọ, ọ dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ị nyefee otu blog post nke jikọtara na saịtị mpụga. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji faịlụ .htaccess weghachite weebụsaịtị. I nwekwara ike iduzi ndị ọbịa site na ụdị ochie HTTP nke saịtị ahụ gaa na ụdị HTTPS ọhụrụ dị nchebe karị. Tinye ya na faịlụ .htacess:
Security - E nwekwara ọtụtụ ụzọ iji faịlụ .htaccess iji tinye usoro nchekwa dị elu maka WP. Otu n'ime ndị a bụ kpochie uzo iji nweta otu faili nke mere na naanị ndị ọrụ nwere nyocha ziri ezi nwere ike ịnweta faịlụ ndị isi na saịtị WordPress gị na-agba ọsọ. Nwere ike iji koodu a, tinye na njedebe nke faịlụ .htaccess gị, iji belata ohere ịnweta ọtụtụ faịlụ faịlụ:
Gbanwee URL - Akụkụ ọzọ bara uru nke faịlụ .htaccess, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe mgbagwoju anya iji mejuputa, bụ na enwere ike iji faịlụ ahụ jikwaa ụzọ URL gosipụtara na mgbe ndị ọbịa gị nweta saịtị gị. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga - achọ ijide n'aka na ị na - eji ụdị Apache kachasị ọhụrụ. Nke a na-eme ka URL nke otu ibe dị iche na ndị ọbịa. Ihe atụ ikpeazụ a - ma eleghị anya - ọ dị ntakịrị maka ọtụtụ ndị ọrụ na-eji faịlụ .htaccess eme ihe. Agbanyeghị, etinyegoro m ya iji gosi gị otu ihe ga - esi nweta ya na faịlụ ahụ. Gbakwunye nke a na faịlụ .htaccess gị:
Furtherga n'ihu Na .htaccess
Rụ ọrụ na faịlụ .htaccess bụ ụzọ dị mma iji mụta banyere otu saịtị WordPress gị si arụ ọrụ na ọkwa dị mkpa karị, na iji nye gị ntakịrị nkọwapụta maka nhazi nke ọbụlagodi saịtị WP na-enye gị. Ozugbo imesịrị ịrụ ọrụ na faịlụ .htaccess ahụ site na ịme mgbanwe ndị bụ isi anyị kọwara n'elu, ọtụtụ nhọrọ ga-emepeịrị gị. Otu, dị ka anyị kwurula na mbụ, bụ ikike tọgharịa WordPress blog gị.
Nke ọzọ bụ na ọtụtụ ụzọ iji melite nchekwa WordPress gị gụnyere ịgbanwe faịlụ .htaccess ozugbo, ma ọ bụ jiri otu usoro FTP mee mgbanwe na faịlụ mgbọrọgwụ ndị ọzọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ozugbo ịmalite ileba anya na mkpokọta nke saịtị gị, ị ga-ahụ ohere na-enweghị ngwụcha maka ịhazi na mmelite.
Tags: 301 redirectekwe kagọnarị ihe niilefaịlụftphtaccesshtaccess faịlụhtaccess faịlụhtaccess gbanwee urlhtaccess degharịahtaccess nchekwaịtụ agọnahụregexWordPressWordPress ndabere
Gary Stevens bụ onye nrụpụta n'ihu. Ọ bụ onye ngọngọ oge niile na onye ọrụ afọ ofufo na-arụ ọrụ maka ntọala Ethereum yana onye ọrụ Github na-arụ ọrụ.